26 Otú a ka e si kee ndị nche ọnụ ụzọ ámá+ n’ìgwè n’ìgwè: Ndị si n’agbụrụ Kora+ bụ Meshelemaya+ nwa Kore, onye si n’agbụrụ Esaf. 2 Meshelemaya mụrụ ụmụ ndị ikom: Zekaraya bụ́ ọkpara ya, Jedayel bụ nwa ya nke abụọ, Zebadaya bụ nwa ya nke atọ, Jatniel bụ nwa ya nke anọ, 3 Ilam bụ nwa ya nke ise, Jehohenan bụ nwa ya nke isii, Elaịho-inaị bụ nwa ya nke asaa. 4 Obed-idọm+ mụrụ ụmụ ndị ikom: Shemaya bụ́ ọkpara ya, Jehọzabad bụ nwa ya nke abụọ, Joa bụ nwa ya nke atọ, Seka bụ nwa ya nke anọ, Netanel bụ nwa ya nke ise, 5 Amiel bụ nwa ya nke isii, Ịsaka bụ nwa ya nke asaa, Piuletaị bụ nwa ya nke asatọ; n’ihi na Chineke gọziri ya.+ 6 A mụụrụ Shemaya nwa ya ụmụ ndị ikom bụ́ ndị na-achị achị n’ụlọ nna ha, n’ihi na ha bụ ndị dike ruru eru. 7 Ụmụ Shemaya bụ Ọtnaị na Refael na Obed, Elzebad, bụ́ onye ụmụnne ya bụ́ Elaịhu na Semakaya bụ ndị ruru eru. 8 Ndị a niile bụ ụmụ Obed-idọm, ha na ụmụ ha na ụmụnne ha, ndị ruru eru ma dị ike ịrụ ọrụ, dị mmadụ iri isii na abụọ bụ́ ndị Obed-idọm nwere. 9 Meshelemaya+ mụrụ ụmụ, nweekwa ụmụnne, bụ́ ndị ikom ruru eru, ha dị mmadụ iri na asatọ. 10 Hosa bụ́ onye si n’agbụrụ Meraraị mụrụ ụmụ. Shimraị bụ onyeisi, ọ bụghị ya bụ ọkpara+ kama nna ya họpụtara ya ka ọ bụrụ onyeisi;+ 11 Hilkaya bụ onye nke abụọ, Tebalaya bụ onye nke atọ, Zekaraya bụ onye nke anọ. Ụmụ Hosa niile na ụmụnne ya dị iri na atọ. 12 N’ime ìgwè ndị a bụ́ ndị nche ọnụ ụzọ ámá, ndị isi ọrụ ha nwere ọrụ dị nnọọ ka ụmụnne ha nwere,+ ya bụ, ije ozi n’ụlọ Jehova. 13 Ha wee feere ma onye nta ma onye ukwu nza+ dị ka ọnụmara ha dị iche iche si dị,+ maka ọnụ ụzọ ámá dị iche iche. 14 Nza e fere maka ebe ọwụwa anyanwụ wee ma Shelemaya.+ Ha fere nza maka Zekaraya+ nwa ya, bụ́ onye ndụmọdụ+ nke nwere ezi uche, nza mara ya wee bụrụ maka ebe ugwu.+ 15 Nke mara Obed-idọm bụ maka ebe ndịda, ụmụ ya+ nwetakwara ụlọ nkwakọba ihe.+ 16 Nke mara Shọpim na Hosa+ bụ maka ebe ọdịda anyanwụ nke dị nso n’Ọnụ Ụzọ Ámá Shaleket, n’akụkụ okporo ụzọ gara ebe mgbago, otu ìgwè ndị nche+ nọ n’akụkụ ìgwè ndị nche+ nke ọzọ; 17 ndị Livaị isii na-anọ n’ebe ọwụwa anyanwụ; anọ n’ebe ugwu n’otu ụbọchị; anọ n’ebe ndịda n’otu ụbọchị;+ ha na-anọkwa abụọ abụọ n’ụlọ nkwakọba ihe;+ 18 n’ihe owuwu ụzọ mbata nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ, mmadụ anọ na-anọ n’okporo ụzọ,+ mmadụ abụọ na-anọ n’ihe owuwu ụzọ mbata ahụ. 19 Ọ bụ otú a ka e si kee ndị nche ọnụ ụzọ ámá bụ́ ndị si n’agbụrụ Kora+ na ụmụ Meraraị,+ n’ìgwè n’ìgwè. 20 A bịa n’ụmụ Livaị, Ahaịja na-elekọta akụ̀+ dị n’ụlọ ezi Chineke, na-elekọtakwa akụ̀ ndị e doro nsọ.+ 21 N’ime ụmụ Ledan,+ ya bụ, ndị si n’agbụrụ Geshọn, ndị Ledan mụrụ; ndị bụ́ ndị isi n’ọnụmara dị iche iche nke Ledan, onye agbụrụ Geshọn, e nwere Jehayelaị.+ 22 Ụmụ Jehayelaị, bụ́ Zitam na Joel+ nwanne ya, na-elekọta akụ̀+ dị n’ụlọ Jehova. 23 A bịa n’ụmụ Amram, ụmụ Izha, ụmụ Hibrọn, ụmụ Ọziel,+ 24 ọ bụ Shebuel+ nwa Geshọm nwa Mozis bụ onye ndú nke na-elekọta ụlọ nkwakọba ihe. 25 A bịa n’ụmụnne ya, bụ́ ụmụ Elịiza,+ e nwere Rehabaya+ nwa ya na Jesheya nwa Rehabaya na Joram nwa Jesheya na Zikraị nwa Joram na Shelomọt nwa Zikraị. 26 Shelomọt a na ụmụnne ya na-elekọta akụ̀ niile e doro nsọ,+ ndị Devid+ bụ́ eze na ndị isi ọnụmara dị iche iche+ na ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha na nke otu narị otu narị ndị agha nakwa ndị isi ụsụụ ndị agha doro nsọ. 27 Ha si n’ihe e nwetara n’agha+ nakwa n’ihe a kwatara akwata+ doo ihe dị iche iche nsọ maka ilekọta ụlọ Jehova. 28 Ha na-elekọtakwa ihe niile Samuel bụ́ onye ọhụ ụzọ+ na Sọl nwa Kish na Abna+ nwa Nee na Joab+ nwa Zeruya+ doro nsọ. Shelomit na ụmụnne ya na-ahụ maka ihe onye ọ bụla doro nsọ. 29 N’ime ụmụ Izha,+ Kenanaya na ụmụ ya na-ahụ maka ọrụ a na-anọghị n’ime ụlọ nsọ na-arụ+ dị ka ndị ọrụ na ndị ikpe+ Izrel. 30 N’ụmụ Hibrọn,+ Hashabaya na ụmụnne ya, bụ́ ndị ikom ruru eru,+ ndị dị otu puku mmadụ na narị asaa, na-elekọta ndị Izrel bi n’ógbè Jọdan, n’ebe ọdịda anyanwụ, n’ihe metụtara ọrụ Jehova dum nakwa ozi a na-ejere eze. 31 A bịa n’ụmụ Hibrọn, Jeraịja+ bụ onyeisi ọnụmara na ezinụlọ dị iche iche nke ụmụ Hibrọn. N’afọ nke iri anọ+ nke ọbụbụeze Devid, a chọgharịrị wee hụ ndị dimkpa bụ́ ndị dike n’etiti ha n’ime Jeza+ nke dị na Gilied.+ 32 Ụmụnne ya, bụ́ ndị ikom ruru eru,+ dị puku mmadụ abụọ na narị asaa, bụ́ ndị isi ọnụmara dị iche iche.+ Devid bụ́ eze wee mee ha ndị na-elekọta ụmụ Ruben na ụmụ Gad na ọkara ebo ụmụ Manase,+ ka ha na-ahụ maka okwu ọ bụla metụtara ezi Chineke na okwu+ metụtara eze.